Vaovao - Ny fampiakarana lanja - tsy vitan'ny hoe tsara tarehy ianao, fa fomba tsara hampiofanana ihany koa
Ny fampiakarana lanja - tsy vitan'ny hoe tsara tarehy ianao, fa fomba tsara hampiofanana ihany koa
Aza manahy.Aza matahotra na maharikoriko amin'ny teny hoe manainga lanja.Manana lahatahiry iray ao amin'ny solosiko antsoina hoe The Beauty of Weightlifting aho.Raha ny marina, tsara tarehy ny lifting, na ho an'ny hetsika manokana sy ny endrik'ilay atleta.
Ireto ny sasany amin'ireo vatan'ny mpibata mavesatra hojerena:
Efa fantatrao raha toa ka tsara ilay izy, koa nahoana aho no milaza fa io no fomba tsara indrindra hampiofanana?
Matetika izahay dia manao squat, fisintonana mafy, fanerena dabilio, fivoy, fanamafisam-pahefana, fisintonana (mba hananganana ny rafi-pihetsiketsehanao (fananganana vy)), dia vy fanandratana, fa noho ireo fihetsika ireo dia mitazona hatrany ny barbell sy ny mpanazatra. fifandraisana, tsy misy famotsorana (lanja mavesatra tsy manidina), ny fampiofanana hery mipoaka dia tsy ampy.
Inona koa no azo ampiofanina amin'ny fihetsiketsehana mifandraika amin'ny vesatra ankoatra ny teknika sy ny tanjaka?
Ny nerveuses, fanetsehana haingana ny hozatra lehibe.Mazava ho azy fa fanampiana avy hatrany amin'ny fitsambikinana izany, fa tsy amin'ny fampiakarana vy ve?
Ny fahatsapana dia manome anao fahatsapana proprioception tsara kokoa ary mamela anao hifehy tsara kokoa ny vatanao.Ny lalao baolina tsy ilaina ny milaza, tsy fantany izay hetsika natao tamin'ny inona no miseho, mazava ho azy fa tsy maintsy manamafy ny fahatsapana ny proprioception.Omeo ny vy?Tsy voatery ho tonga any an-tampony ianao fa manomboka manao fanazaran-tena, ary te hahafantatra bebe kokoa ny fihetsikao, sa tsy izany?Mila fifehezana tsara kokoa ny vatany ny tsirairay.